နိဗ္ဗာန်နီးသလား ??? | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← Approaching Nirvana (8)
Posted on May 6, 2015 by chitnge
ဤမေးခွန်းမှာ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း ဗဟုသုတ မရှိသေး၍ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နိဗ္ဗာန်သည် နီးသည် ဝေးသည်ကို မပြောအပ်ချေ —
နိဗ္ဗာန်သည် အသင်္ခတဓာတ်ဖြစ်သည်။ (၃၁) ဘုံမှာ သင်္ခတဓာတ်ဖြစ်သည်။ (၃၁) ဘုံမှာ ရှိသော အရာများသည် နိဗ္ဗာန်ကိုထပ်တူထပ်မျှ နှိုင်းခိုင်းစရာ ပြစရာ မရှိချေ။ တင်စား၍ ပြောလိုက ပြောနိုင်သော်လည်း ထပ်တူထပ်မျှတော့မူ ဥပမာ မရှိချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နိဗ္ဗာန်သည် အသင်္ခတဓာတ် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဓာတ်အမျိုးအစားခြင်း မတူချေ။ နိဗ္ဗာန်သည် အစားမထိုးသော ပြုပြင်စီရင်ခြင်းကင်းသော ဓာတ်ဖြစ်၍၊ (၃၁) ဘုံသည် အစားထိုးသော၊ ပြုပြင်စီရင်နေရသော ဓာတ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်္ခတနှင့် အသင်္ခတ ကွဲကွဲပြားပြား ခွဲခြားနားလည် နိုင်လေသည်။
သင်္ခတ၌ရှိသော အရာများဖြင့် အသင်္ခတဓာတ် အကြောင်းကို တိတိကျကျ တိုက်ရိုက် နှိုင်းခိုင်းပြောပြရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။
နိဗ္ဗာန်သည် ရုပ်နာမ်နှင့် သွား၍မရသော သဘောလည်း ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် နီးသည် ဝေးသည်ဟူ၍ မပြောအပ်ချေ။ မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် တရားဟောကြားတော်မူစဉ် စကားတစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးအကြားတွင် နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုသည် ဟူသောအဆိုရှိသည်။
ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန်သည် နီးသလား ဝေးသလားဟူ၍ ဝင်စားစရာမလိုချေ။ ကိုယ်ကိလေသာကို သတ်နိုင်သောဉာဏ် ဘယ်လောက်အထိ အစွမ်းထက်သလဲ ဟူသော သဘော၌သာ တည်သည်။ အနီးအဝေးသည် (၃၁) ဘုံ သင်္ခတဓာတ်များ၌ သုံးနှုန်းအပ်သော်လည်း နိဗ္ဗာန်နှင့်ပတ်သက်၍ မသုံးနှုန်းအပ်ချေ။ နိဗ္ဗာန်သည် ဝေးသည် နီးသည် မရှိချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဓာတ်သဘာဝခြင်း မတူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန်ကို ရုပ်နာမ်နှင့် သွား၍မရ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်နှင့်သာ ဝင်စား၍ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးအပ်ပါသည်။
Tags: Buddhism, English Posts, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဖိုလ်ဉာဏ်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မြတ်စွာဘုရား, ရုပ်နာမ်
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, English Posts, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဖိုလ်ဉာဏ်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မြတ်စွာဘုရား, ရုပ်နာမ်. Bookmark the permalink.